Manchester United oo kooxda waa-weyn u soo dallacsiinaysa lix ciyaaryahan oo da’yar ah – Gool FM
“Kubadda cagta kuma soo laaban doonto siddii ay aheyd ka hor Coronavirus” – Lionel Messi
Halyeyga reer Brazil ee Ronaldo oo magacaabay SHANTA ciyaartoy ee ugu fiican adduunka xilligan
Man United oo ku dhawaaqday xiddiga ka tirsan Kooxda Juventus ee ay doonayso inay qeyb looga dhigo heshiiska Paul Pogba
Real Madrid oo sare u qaaday dadaalka ay ku doonayso inay kula soo wareegto laacib ka ciyaara Premier League
Suxufi reer Talyaani ah oo shaaciyey kooxda ka dheesha Premier League ee hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly
Laacibka khadka dhexe ee Arsenal, Lucas Torreira oo shaaca ka qaaday Kooxda uu ku riyoonayo inuu ku biiro
Bruno Fernandes oo weerar afka ku qaaday xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Nemanja Matic… (Sidee wax u jiraan?)
“Messi malala bar-bardhigi karo Cristiano Ronaldo” – Gary Lineker
Berbatov oo ka aragti dhiibtay wararka la xiriirinaya Man United heshiiska Philippe Coutinho
Manchester United oo kooxda waa-weyn u soo dallacsiinaysa lix ciyaaryahan oo da’yar ah
Haaruun May 10, 2019
(Manchester) 10 Maajo 2019. Macallin kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la soo warinayaa inuu kooxda koowaad u soo dallacsiinayo lix ciyaaryahan oo da’yar ah, isla markaana uu ku soo dari doono qaarkood shaxdiisa kulanka Axadda ee Premier League oo ay la leeyihiin naadiga Cardiff City.
Red Devils ayaa wajahaysa kooxdii uu Solskjaer hoggaamin jiray ee Cardiff kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana ay horayba u xaqiijiyeen inay seegeen inay ku dhammaystaan afarta sare ee horyaalka Ingiriiska.
Sida ay warinayso Majaladda Manchester Evening News Macallinka reer Norway ayaa kulankan fursad siin doona xiddigaha da’da yar ee bandhigga wacan ka sameynaya garoonka Old Trafford, waxaana uu u soo dallacsiin doonaa kooxda koowaad.
Angel Gomes, Dylan Levitt, Arnau Puigmal, Mason Greenwood, James Garner iyo Tahith Chong ayaa dhammaantood tababar la qaatay isbuucaan kooxda waa weyn ee Man United, waxaana la caddeeyey in hadda ay qaarkood boos ka heli doonaan kulanka Man Utd ay ciyaarayso Axadda ee horyaalka Premier League.
Chong ayaa horay kooxda koowaad uga soo muuqday, waxaana uu ahaa bedel la isticmaalay kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen Huddersfield Town todobaadkii la soo dhaafay, halka Gomes, Garner iyo Greenwood ay sidoo kale ku lug lahaayeen marxalado kala duwan oo xilli ciyaareedkan ah.
"Markey Barcelona guul gaarto waxaa la leeyahay Messi ayaa ka dambeeya, laakiin markey Guul darreysato waxaa la eedeynayaa.....".- Ronaldo oo weeraray Messi
Barcelona oo go’aansatay inay iska iibiso Philippe Coutinho xagaagan… (Waa kuwee kooxaha doonaya?)